Basic and Advanced Technical Analysis & Trading Training Course, Institute of Business and Investment Management - IBIM, Yangon Event | Shtoor
Institute of Business and Investment Management - IBIM
Saturday, 25 November 2017, 09:30
Forecasting Forex/Gold /Stock Markets Courses ... (Basic & Advanced Technical Analysis Level 1 Courses) ... Learn to Make Money in Forex and Stock Markets ... 📎
A Technical Approach to Global Financial Markets (Forecasting Financial Markets using Technical Analysis) …
STA Diploma/CFTe Students: FREE
STA/MMAS Member: 20% Discount
Basic TA: သင်တန်းအချိန်: 09:30am to 3pm (November 25 + 26) (SAT + SUN)
Fee: K 100,000
Advanced TA (Advanced One): သင်တန်းအချိန်: 09:30am to 3pm (December 2+3) (SAT + SUN)
Fee: K 125,000
TA သည် Gold, Forex, Stock ဈေးကွက်များကို ခန့်မှန်းရာတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အသုံးပြုသော ဈေးကွက်ခန့်မှန်းခြင်းဆိုင်ရာပညာရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည် …
Learn how to read stock, gold and FX charts like Pros ... Basic and Advanced One ... Technical Analysis Course ...
* Stock, Gold and Foreign Exchange ဈေးကွက်အတက်အကျများကို ခန့်မှန်းလိုသူများ …
* အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်ခန့်မှန်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်သော Technical Analysis (TA) ကို အခြေခံမှစ၍ စနစ်တကျလေ့လာလိုသူများ …
* Professional market analyst ဖြစ်လိုသူများ ...
* Technical Analysis (TA) ဘာသာရပ်ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် A Technical Approach to Global Financial Markets အမည်ဖြင့် စတင်ပို့ချခဲ့သော … certified technical analyst တစ်ဦးဖြစ်သော … ဆရာဦးအောင်သိန်းထွန်း (Chartered MCSI, CFTe, MSTA) မှ ကိုယ်တိုင်ပို့ချပါမည် … (မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ဘဏ်ကြီးတစ်ချို့တွင်လည်း ပို့ချပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်) ... ဆရာဦးအောင်သိန်းထွန်း သည် UK Society of Technical Analysts (STA) ကို ဦးဆောင်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ...
* သင်တန်းတစ်လျှောက်တွင်လည်း … Realtime Chart များနှင့်တကွ … Professional Charting Platform များကိုပါ … အသုံးပြုသင်ကြားသွားပါမည် …
* ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး … Forex Pairs တစ်ချို့ … ကမ္ဘာ့ Stock index များကိုပါ … Research ... Analysis ... နှင့် ... Forward Testing များပါ ပြုလုပ်ပေးသွားပါမည် … ဤအစီအစဉ်သည် Market Insight Program အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည် …
* သင်သည် လက်ရှိတွင် Gold … Forex … နှင့် Stock များ … အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်နေသူဖြစ်ပါက … ဤအစီအစဉ်များသည် … သင်၏ Trade ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်အတွက် … အလွန်အရေးပါ၍ အကျိုးအမြတ်များ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး … ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကိုလည်း … လျော့နည်းလျော့ချ ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည် …
* ဤသင်တန်းသည် … စာတွေ့ နှင့် လက်တွေ့ပေါင်းစပ်ထားသော အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည် …
သို့ပါ၍ … Laptop များ … Tablets များ ယူဆောင်လာရန် လိုအပ်ပါသည် …
တက်ရောက်လိုသူများ စာရင်းပေးသွင်း နိုင်ပါပြီ …
Institute of Business and Investment Management (IBIM)
253 (A101), Mahabandoola Road
45th Street Corner
In front of UFC Tower
Call: 09 96188 9622; 09 78393 6390
Basic TA: သငျတနျးအခြိနျ: 09:30am to 3pm (November 25 + 26) (SAT + SUN)
Advanced TA (Advanced One): သငျတနျးအခြိနျ: 09:30am to 3pm (December 2+3) (SAT + SUN)
TA သညျ Gold, Forex, Stock စြေးကှကျမြားကို ခနျ့မှနျးရာတှငျကမ်ဘာတဈဝှမျး အသုံးပွုသော စြေးကှကျခနျ့မှနျးခွငျးဆိုငျရာပညာရပျတဈခု ဖွဈပါသညျ …
* Stock, Gold and Foreign Exchange စြေးကှကျအတကျအကမြားကို ခနျ့မှနျးလိုသူမြား …
* အပွညျပွညျဆိုငျရာ စြေးကှကျခနျ့မှနျးခွငျးဆိုငျရာ ဘာသာရပျကွီးတဈခု ဖွဈသော Technical Analysis (TA) ကို အခွခေံမှစ၍ စနဈတကလြလေ့ာလိုသူမြား …
* Professional market analyst ဖွဈလိုသူမြား ...
* Technical Analysis (TA) ဘာသာရပျကို ၂၀၀၅ ခုနှဈမှစ၍ မွနျမာနိုငျငံတှငျ A Technical Approach to Global Financial Markets အမညျဖွငျ့ စတငျပို့ခခြဲ့သော … certified technical analyst တဈဦးဖွဈသော … ဆရာဦးအောငျသိနျးထှနျး (Chartered MCSI, CFTe, MSTA) မှ ကိုယျတိုငျပို့ခပြါမညျ … (မွနျမာနိုငျငံ၏ ထိပျတနျး ဘဏျကွီးတဈခြို့တှငျလညျး ပို့ခပြေးခဲ့ပွီး ဖွဈပါသညျ) ... ဆရာဦးအောငျသိနျးထှနျး သညျ UK Society of Technical Analysts (STA) ကို ဦးဆောငျနသေူ တဈဦးဖွဈပါသညျ ...
* သငျတနျးတဈလြှောကျတှငျလညျး … Realtime Chart မြားနှငျ့တကှ … Professional Charting Platform မြားကိုပါ … အသုံးပွုသငျကွားသှားပါမညျ …
* ကမ်ဘာ့ရှစြေေး … Forex Pairs တဈခြို့ … ကမ်ဘာ့ Stock index မြားကိုပါ … Research ... Analysis ... နှငျ့ ... Forward Testing မြားပါ ပွုလုပျပေးသှားပါမညျ … ဤအစီအစဉျသညျ Market Insight Program အစီအစဉျတဈခု ဖွဈပါသညျ …
* သငျသညျ လကျရှိတှငျ Gold … Forex … နှငျ့ Stock မြား … အရောငျးအဝယျ ပွုလုပျနသေူဖွဈပါက … ဤအစီအစဉျမြားသညျ … သငျ၏ Trade ဆုံးဖွတျခကျြမြားခရြနျအတှကျ … အလှနျအရေးပါ၍ အကြိုးအမွတျမြား ရရှိနိုငျမညျဖွဈပွီး … ဆုံးရှုံးနိုငျခွမြေားကိုလညျး … လြော့နညျးလြော့ခြ ကာကှယျနိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ …
* ဤသငျတနျးသညျ … စာတှေ့ နှငျ့ လကျတှပေ့ေါငျးစပျထားသော အစီအစဉျတဈခု ဖွဈပါသညျ …
သို့ပါ၍ … Laptop မြား … Tablets မြား ယူဆောငျလာရနျ လိုအပျပါသညျ …
တကျရောကျလိုသူမြား စာရငျးပေးသှငျး နိုငျပါပွီ …
#STADiploma #CFTe #IBIMMyanmar #IBIM #IBIMAlumni
#TechnicalAnalysis #Forex #Stock #Currencies
253 (A101), Mahabandoola Road, In front of UFC, Yangon, Myanmar
View more events at Institute of Business and Investment Management - IBIM